ထမင်းကြိုက်တဲ့ ကလေး ဗိုက်ပူနေလို့ . . . – Healthy Life Journal
ထမင်းကြိုက်တဲ့ ကလေး ဗိုက်ပူနေလို့ . . .
Posted on ဒီဇငျဘာ 25, 2018
မေး ။ ကျွန်မကလေးက အသက် ငါးနှစ်ပါ။ ထမင်းကို အရမ်းကြိုက်ပြီး အများကြီးစားပါတယ်။ အရမ်းတော့ မ၀ပေမယ့် ဗိုက်ပူနေပါတယ်။ အဲဒါ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲရှင့်။
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည် ။
ဖြေ ။ ထမင်းအများကြီး မစားသင့်ပါဘူး။ ထမင်းအများကြီးစားရင် အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကလေးကတစ်ခါစားရင် ထမင်းတစ်ပန်းကန်(ထမင်းစားဇွန်းရှစ်ဇွန်း)ပဲ စားသင့်ပါတယ်။ နေ့လယ် ရှစ်ဇွန်း၊ ညနေ ရှစ်ဇွန်းပဲ စားသင့်ပါတယ်။ အသားပိုကျွေးပြီး အဓိကအရွက်များများ ကျွေးပေးရပါမယ်။ ဟင်းရွက်ကြော်များများကျွေးပြီး ဗိုက်ပြည့်အောင် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
Related Items:fat belly, kid
အမျိူးသား ဗိုက်ပူသော ပြဿနာ